हिन्दू राज्य कायम गर्न जनमत संग्रहको माग बढ्नु सकारात्मक हो-शशांक कोइराला-Brtnepal.com
Loading... हिन्दू राज्य कायम गर्न जनमत संग्रहको माग बढ्नु सकारात्मक हो-शशांक कोइराला
काठमाडौं, ३० असोज Published on October 15, 2016 at 8:28 pm
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले धर्मको विवाद टुंग्याउन जनमतसंग्रह उपयुक्त विधि भएको बताएका छन् । हिन्दू राज्य कायम गर्न जनमत संग्रहको माग बढ्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
कांंग्रेसले औपचारिक नीति नबनाए पनि हिन्दु राष्ट्रका विषयमा अभिव्यक्ति दिने नेता डा. शशांक १३औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । अर्का नेता शेखर कोइराला २५ खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए । हिन्दु राज्यकै अभियान चलाएका नेता खुमबहादुर खड्का पनि २५ खुला केन्द्रीय सदस्यमा दोस्रो धेरै मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।